अश्लील कथा खेल – पाठ-आधारित अश्लील खेल
को सौन्दर्य आनन्द अश्लील कथा खेल
अश्लील गेम संसारमा धेरै परिवर्तन भएको छ, संग क्रान्ति ल्याए द्वारा स्विच देखि एक फ्लैश एचटीएमएल5गर्न. नयाँ पुस्ता को खेल हेर्दा अचम्मको संग, 3D सुनाए वर्ण जो हेर्न र मा सार्न व्यावहारिक तरिकामा. तर त्यहाँ एउटा खेल विधा थिएन कि यो आवश्यक परिवर्तन गर्न अझै भयानक छ । म कुरा गर्दै छु कि खेल हो basing आफ्नो कार्य मा कथा । तपाईं गर्यौं भने कहिल्यै खेलेको कथा-आधारित अश्लील खेल तपाईं बाहिर हराइरहेको छौं., कुनै कुरा तिनीहरूले भने बारेमा सबै पाठ-आधारित gameplay वा तिनीहरूले भने ग्राफिक उपन्यासों को एक धेरै संग संवाद र चरित्र निर्माण, कि खेल मा आधारित छन् कथाहरू छन्, सधैं रोमाञ्चक छ । र त्यो किनभने तपाईं प्राप्त गर्न के महसुस वर्ण माध्यम जाँदैछन्. स्तर को विसर्जन तपाईं अनुभव हुनेछ जब तपाईं यी खेल खेल छौं अचम्मको छ । यदि तपाईं तिनीहरूलाई खेल्न पर्याप्त लामो छ, तपाईं अन्त हुनेछ संग पहिचान को अवतार that you ' ll be खेल र खुशी प्राप्त हुनेछ बाहिर को कार्य गरिने ठूलाठूला.
मा अश्लील कथा खेल हामी भेला भए सबै भन्दा राम्रो अनलाइन वयस्क खेल संग, बलियो षड्यन्त्र लाइनहरु र उत्कृष्ट लेखिएका कथाहरू । र हामीले प्रदान तिनीहरूलाई सबै मुक्त लागि. तपाईं डाउनलोड गर्न आवश्यक छैन केहि र तपाईं गर्न आवश्यक छैन को एक सदस्य बन्न, हाम्रो साइट मनाइरहेको अघि यी सबै खेल । र हामी तिनीहरूलाई यति धेरै. कुनै कुरा कसरी स्वास्थ्यकर वा कसरी जंगली जस्तै तपाईं आफ्नो कामुक कथाहरू, तपाईं पाउनुहुनेछ, एक खेल संग, एक असल षड्यन्त्र बनाउन हुनेछ भनेर तपाईं सह हाम्रो साइट मा., भन्ने तथ्यलाई वाहेक, हामी यति धेरै खेल पहिले नै माथि र चलिरहेको हाम्रो मंच मा, हामी थप्दा राख्न नयाँ शीर्षक हरेक हप्ता, त्यसैले तपाईं आउन गर्नुपर्छ फिर्ता गर्न अमेरिकी र रमाइलो खेल तपाईं खेलेको छैन अझै । Read more about our संग्रह below.
कस्तो अश्लील कथा खेल तपाईं आनन्द?
हामी एक विशाल चयन, hardcore porn खेल तपाईं को लागि. हामी यति धेरै फरक सनक र कल्पनामा तपाईं अन्वेषण गर्न सक्छन् माध्यम, राम्रो लिखित र मा-गहिराई कथाहरू हुनेछ भन्ने कृपया मा आफ्नो fantasies एक तरिका तपाईं कहिल्यै हुनत सम्भव छ । कुनै अश्लील चलचित्र वा नियमित सेक्स खेल हुनेछ कहिल्यै प्रदान गर्न सक्षम हुन तपाईं को यस प्रकारको सन्तुष्टि.
एक हात मा हामी पाठ-आधारित खेल हो, जो बारे सबै कथा र बनाउने तपाईं महसुस सबै वर्ण माध्यम जाँदैछन्. यी यात्रालाई वर्णन हुनेछ हरेक बातचीत र किंक काम मा यति धेरै विस्तार हुनेछ भन्ने तस्वीर यो vividly आफ्नो मन मा. You will feel like you ' re interacting with वास्तविक बालिका र जब मानिसहरू यी खेल खेल, किनभने हरेक भावना कसैले महसुस हुनेछ, तिनीहरूले थिए भने आफूलाई पाउन भन्ने अवस्था छ कौशलतापूर्वक मा वर्णन गरिएको पाठ को खेल., अर्कोतर्फ, हामी सबै को ग्राफिक उपन्यासों र सेक्स जीवन सिम्युलेटर खेल हाम्रो साइट मा हो, जो संयोजन कहानी र संवाद संग ग्राफिक कार्य हुनेछ भनेर अलमल्ल पार्नु you.
सबै को खेल मा हाम्रो संग्रह आउँदै छन् संग धेरै अन्त, किनभने हरेक निर्णय तपाईं बनाउन खेल मा असर गर्नेछ कसरी कार्य प्रकट. खेल जस्तै Incubus शहर छन् विशेषता कुनै कम भन्दा 22 बाटो मा जो तपाईं गर्न सक्छन्, साथ जान, यो कथा । यो बाटो मा, तपाईं खेल्न सक्छन्, एउटै खेल र अधिक फेरि कहिल्यै छ र यो कहिल्यै नीरस महसुस. त्यहाँ यति धेरै अन्य उदाहरणहरू धेरै खेल अन्त्य, and I ' m going to let you पत्ता तिनीहरूलाई सबै हाम्रो अद्भुत संग्रह अश्लील कथा खेल ।
ग्राफिक्स मा अश्लील कथा खेल
बस किनभने यो खेल, कि हामी छ मा आधारित छन्, सबैभन्दा भाग मा कहानी, that doesn 't mean you won' t get केही मीठा ग्राफिक्स बाहिर तिनीहरूलाई । हामी यति धेरै awesomeness तपाईं प्रस्ताव मा यो कुरा । पनि पाठ-आधारित खेल छन् संग आउँदै दृश्य खुशी छ । तिनीहरूलाई केही छन् विशेषता 3D वर्ण अरूलाई आउँदै संग फोटो र GIFs को कामुक कार्य मिल्ने के तपाईं भएको छु उत्थान गर्न मा एक कहानी छ ।
तर त्यसपछि त्यहाँ छन् ग्राफिक्स मा दृश्य उपन्यास भनेर हामी सुविधा हाम्रो साइट मा, र यी ग्राफिक्स पनि छन् अन्तरक्रियात्मक. मूलतः, तपाईं खेल हुनेछ एक कहानी आधारित खेल सम्म को डरलाग्दो बिन्दु मा, कार्य क्षण जब तपाईं प्राप्त हुनेछ रमाइलो गर्न केही रोमाञ्चक सेक्स gameplay मा जो तपाईं हुनेछ कसरी नियन्त्रण वर्ण हुनेछ banging on screen. We are विशेषता ज्यादातर एचटीएमएल5खेल हाम्रो साइट मा, जो संग आउँदै छन् अचम्मको ग्राफिक्स., तर हामी पनि उज्यालो अश्लील खेल थिए जो crafter वर्ष पहिले र थिए emulated हाम्रो सर्भर मा हुन सबै संग संगत आधुनिक उपकरणहरू तपाईं प्रयोग हुन सक्छ, अश्लील खेल.
एक पार मंच वेबसाइट प्रदान सुरक्षित खेल
अश्लील कथा खेल आउँदै छ संग एक विशाल संग्रह को खेल र हरेक एकल एक तिनीहरूलाई खेल्न निःशुल्क छ. We don 't ask you to join our site and we don' t ask को कुनै पनि प्रकारको लागि दान । We don ' t even need आफ्नो व्यक्तिगत डेटा अघि दिँदै तपाईं आनन्द यी खेल. रूपमा लामो तपाईं छन् भन्दा 18 वर्ष पुरानो तपाईं रमाइलो गर्न सक्षम हुनेछ, यो खेल संग कुनै सीमा छ । उन को शीर्ष मा, हामी पक्का गरे प्रदान गर्न एक वेबसाइट र एक संग्रह को कट्टर खेल लागि उपलब्ध छ कि सबैलाई । कुनै कुरा उपकरण तपाईं को प्रयोग गर्न सक्छन् र कुनै कुरा ब्राउजर को आफ्नो विकल्प, तपाईं गर्न सक्षम हुनेछ खेल खेल्न संग कुनै सीमा छ । , उन को शीर्ष मा, हामी पनि, ठाँउ मा राखे केही समुदाय विशेषताहरु आनन्द उठाउन सक्छन् भनेर सबैलाई द्वारा सामेल बिना हाम्रो साइट को एक सदस्य को रूप. तपाईं टिप्पणी र प्रवेश मा गरम चर्चा को विषय हाम्रो खेल संग सबै अन्य सदस्यहरु को हाम्रो शरारती समुदाय । तपाईंलाई रुचि भने हाम्रो साइट मा, तपाईं गर्नुपर्छ बुकमार्क यो । त्यो किनभने हामी अपलोड नियमित नयाँ खेल छ, र तपाईं गर्न सक्षम हुनेछ खेल्न तिनीहरूलाई सबै मुक्त लागि. हाम्रो संग्रह को कथा आधारित खेल मा छ जो तपाईं को धेरै अन्त मा, तपाईं सयौं हुनेछ hours of gameplay. आनंद!